Diyopost.com :: १८ दिनदेखी थाईल्याण्डको गुफामा फसेका बालवालिकाहरुको सकुशल उद्धार ! (भिडियो हेर्नुहोस) १८ दिनदेखी थाईल्याण्डको गुफामा फसेका बालवालिकाहरुको सकुशल उद्धार ! (भिडियो हेर्नुहोस) - Diyopost.com
१८ दिनदेखी थाईल्याण्डको गुफामा फसेका बालवालिकाहरुको सकुशल उद्धार ! (भिडियो हेर्नुहोस)
एजेन्सी । थाईल्याण्डको उत्तरी क्षेत्रस्थित थेम लुआङ गुफामा फसेका किशोरहरुको सकुशल उद्धार गरिएको छ । विगत १८ दिन देखी उक्त गुफामा फसेका सबै किशोरहरु थाइ फुटबल खेलाडी रहेका छन । किशोरहरु सहित उक्त फुटबल टोलीको प्रशिक्षक पनि गुफामा फसेका थिए ।
अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार गत आईतबार देखी उद्धार कार्य शुरु भएको र त्यस दिन चार बालकलाई उद्धार गरिएको थियो । लगत्तै सोमबार पाँच जनालाई गुफाबाट सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने आज फुटबल प्रशिक्षक र तिन जनालाई उद्धार गरिएको छ ।
२३ जुनमा उक्त गुफा छिरेका फुटबल टोलीहरु त्यसपछिको अविरल वर्षालगत्तै गुफभित्र बाढी छिरेपछि वाहिर निस्कन सकेका थिएनन । २३ जुनमा वेपत्ता भएका उनिहरु गुफामा अलपत्र परेका त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले खोजपश्चात पत्ता लगाएका थिए ।
गुफामा वाढी छिरेपछि उद्धारकार्य निकै नै चुनौतिपुर्ण थियो । सरकारले त्यहाँ फसेका बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अक्सिजनको व्यवस्था गरेको थियो । उद्धारको क्रममा एक सुरक्षाकर्मीले ज्यानसमेत गुमाउन पुगेका थिए ।
१३ जनाकै सकुशल उद्धार गर्नको निम्ति थाई सरकारले अन्तराष्ट्रिय गोताखोर तथा प्रहरी र सेना परिचालन गरेको थियो । सबै खेलाडीहरुलाई उद्धार गरिएतापनि गुफाभित्र अझै गोताखोरका चार सैनिक रहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ ।
गुफाबाट सबैलाई सकुशल उद्धार गरिएतापनि १३ जना मध्य पाँच जनाको स्वास्थ्यस्थिति भने केही खराब देखिएको छ । आठ जनाको स्वास्थ्य स्थिति भने सामान्य रहेको गोताखोरका चिकित्सकहरुले बताएका छन । पाँचजनामध्य केहीमा श्वासप्रश्वास सम्वन्धि समस्या देखिएको तथा केहीमा शरिरको तापक्रम न्युन र केहीमा ज्यादा भेटिएको बताईएको छ । उद्धार गरिएका सम्पुर्णको केही दिनपछि पुनः स्वास्थ्य परिक्षण गरिने चिकित्सकहरुले बताएका छन ।